Iwo madzishe enguva, kuvharwa kweWhite City Trilogy | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Vanyori, Type, Nhema nhema
Iwo madzishe enguva ibhuku rechitatu ra White Guta Trilogy yakagadzirwa nemunyori wechiSpanish Eva García Sáenz de Urturi. Kufanana nemabhuku ekutanga, muchikamu chino protagonist ndiye Inspector weCriminal Investigation Division yeVitoria, Unai López de Ayala, anonzi "Kraken". Ndiani, kunyangwe achichengetedza hunhu hwake hwekusindimara, anoramba achichinja achienda kune hunodakadza hunhu.
Mavara echipiri e Iwo madzishe enguva —Kunyanya shamwari yaKraken, Estíbaliz— akakodzera. Saizvozvo, kuferefetwa kwenyaya nyowani kunotungamira kune imwe mhuri isingazivikanwe yakabatana naUnai kubva kuMiddle Ages. Chaizvoizvo, kuvhara kwetatu trogogy ndiwo maviri enganonyorwa mune imwe: mapurisa anonakidza mune ino uye nhoroondo yenhoroondo nezvenzanga ye Vitoria mukati meMiddle Ages.
1 Bibliographic synthesis yemunyori
1.1 White Guta Trilogy
2 Kuongorora uye Pfupiso yeiyo Nguva Ishe
2.1 Nhoroondo mbiri mune imwe
2.2 Tsika dzekare dzakateedzerwa mune ino
2.3 Kunetsana kwekare
2.4 Kukura kwepfungwa kweiye protagonist
3 Kuvharwa kwetatu trilogy
Bibliographic synthesis yemunyori
Zvakawanda zve White Guta Trilogy Iyo yakaiswa mutaundi rekumusha kweEva García Sáenz de Urturi, Vitoria. Ane degree muOptics neOptometry. Akave akagara muAlicante kubvira 1985. Mutaundi iro akamira kunze nebasa rake mumitauro yakasiyana siyana yemitauro neyekunyora paUniversity yeAlicante.
Mumakore achangopfuura, Eva García Sáenz de Urturi anga ari mutauri kumakongiresi akakosha echiSpanish nemisangano. Nhoroondo yake yekutanga, Saga rekare (2012) yakazviburitsa paAmazon. Yakanga iri budiriro huru pa internet iyo yaigonesa kudhinda kwemuviri naEsfera de Libros. Kubva 2013 akashanda naPlaneta, muparidzi anoona nezvese akasara emabhuku ake kusvika zvino.
Chinyorwa chemabasa ake chakapedzwa na:
Vanakomana vaAdhama - Saga reRakagara-rekare II (2014).
Passage kuenda kuTahiti (2014).
Trilogy yeGuta reWhite
Kunyarara kweGuta Chena (2016).
Iyo mvura inogadzirira (2017).
Iwo madzishe enguva (2018).
Kuongorora uye Pfupiso ye Iwo madzishe enguva
Nhengo dzese dzemhuri yeLópez de Ayala dzinopinda pakuratidzwa kwebhuku reepic rave rinotengesa zvakanyanya, Iwo madzishe enguva. Chinyorwa chakaiswa munguva dzekare chakatangwa pasi pezita rekunyepedzera (Diego Vela). Naizvozvo, vateereri vakamirira kuziva kuti ndiani munyori chaiye. Asi gara rinotanga kunyangwe munyori paasina kupedza kusvika.
Nguva pfupi yapfuura, Kraken anoziviswa nezvechitarisiko chechitunha chemumwe muzvinabhizimusi muchivako chimwe chiri kuitirwa mhemberero. Rufu rwungadai rwakaitika nenzira yakafanana chaizvo neimwe yevakafa vanotsanangurwa munoverengeka. Kunyanya nekuda kwekudhakwa kunokonzerwa neinonzi "Spanish fly" (inonyatso kuzivikanwa se "Viagra yeMiddle Ages").
Nhoroondo mbiri mune imwe
Modus operandi yemhondi inoenderera ichitsvaga nzira dzepakati. Nekudaro, kuitira kuti uone mupomeri (hunyanzvi hwaUnai), zvakakosha kuti uongorore zvese zvakavanzika zvezvakavanzika zvinoratidzwa munoverengeka. Panguva ino, kugona kukuru kwaEva García Sáenz de Urturi mukufumura zano rakaomarara kuri pachena.
Zvezviitiko zvinoitika panguva mbiri dzinoenderana: zvakapfuura zve Iwo madzishe enguva nekugadziriswa kwenyaya yacho panguva ino. Saizvozvowo, nhoroondo yacho inoratidza zvinyorwa zvikuru zvakaitwa nemunyori weAlava. Nekuti aikwanisa kudzoreredza nenzira yepamusoro kwazvo maficha, tsika uye zvakasarudzika zveVitoria nzanga yenguva iyoyo.
Tsika dzekare dzakateedzerwa mune ino
Vakatevera vakaurayiwa kuti vaoneke vakaurayiwa neimwe macabre nzira inonzi "vimbiso yerima" kana kudzora. Yakanga iri mhando yekuurayiwa kunotyisa nekusingaperi kusungwa kwemurume akapiwa mhosva mukati mediki nzvimbo. Vanogona kuve vakavharwa zvakakwana mabhokisi kana makamuri akatwasuka muna Nyamavhuvhu; kufa kwakaitika nenzara kana kushaya mvura mumuviri.
Gare gare, muviri unowanikwa uine zviratidzo zvekuve waka "vhara-up". Muchirongwa ichi chemu mortuary musungwa akakandwa murwizi mudhiramu pamwe chete nejongwe, imbwa, katsi nenyoka. Pakupedzisira, humbowo hwese hwakaunganidzwa naUnai hunomuendesa kuNograno tower. Nhare inoramba ichigara nemwana mukomana wekutanga wemhuri inotonga kwezviuru zvemakore.
Ruzivo rwunounganidzwa runoratidza kuti vagari vepashongwe vanogona kutambura nematambudziko akawanda ekuzivikanwa. Nekudaro, Estíbaliz - uyo ane hukama nemumwe wevatenzi venguva - anogona kunge ari munjodzi. Chinhu chakakosha, zvese zvakapfuura uye nezvazvino, idambudziko rekufungidzira reNgano Don Vela, Diego Vela.
Iyo nyaya inotaurira kuti kuverenga kwakapedza makore maviri marefu pakati penzvimbo ine njodzi yakapihwa naMambo Sancho VI. Paakadzoka, akawana musikana wake wekare - mukadzi akanaka anokudzwa Onneca weMaestu - akaroorwa nemunin'ina wake, Nagorno. Uku kushambadzira kwepedyo kwaizove mbeu yekutsamwa inokwanisa kugara mukati memazana emakore.
Kukura kwepfungwa kweiye protagonist
Sezvo denouement inoswedera, vaverengi vemamwe mabhuku mu trilogy vanowana iyo shanduko yepfungwa yaKraken inonzwisisika. Ndiani akabva pakuve mutikitivha anonyanyisa (kazhinji asina hanya), kusvika pakuva munhu anoteerera nharaunda yake yepedyo.
Quote naEva García Sáenz.
Chikonzero chekuchinja uku kugamuchirwa kwenjodzi dzakasangana naUnai panguva yehudiki hwake (apo aive nherera). Vaviri vakadzi manhamba ari padyo naye zvakanyanya anokanganisa rwomukati rwendo rweiye protagonist: mumwe wake Estíbaliz nemukuru wake, Alba. Pamusoro pezvo, Unai ndiye baba vemusikana uyo anova kukurudzira kwake kukuru kuedza kufara.
Kuvharwa kwetatu trilogy
Mukupedzisira, Unai anowana hukama hwake nevatambi vari munhoroondo yepakati. Muhukama hwepedyo hwepedyo kupfuura hwaangambofungidzira. Kuzarurirwa uku kunoshandura hupenyu hwake uye hupenyu hwemhuri yake yese. Kunyangwe kumonyanisa uye kutendeuka mukukudziridzwa kwetatu kwakaoma, munyori zvinehunyanzvi anogadzirisa mumwe nemumwe wemibvunzo yakamutswa kubva pakutanga kwesaga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Iwo madzishe enguva
Ini ndangoverenga bhuku racho uye rakanaka, asi haritaure kuti ndiani akakanda Estibaliz pamusoro pechituko, (unogona kuzvifungidzira), asi ini handioni riine musoro, bhuku rinofanirwa kuve nemhedzisiro
Cancer yakakunda kurwisa Carlos Ruiz Zafón, asi mazwi ake acharamba achipenya